Izibalo ezibukhoma ~ JLK.NEWS
NgoLwesithathu, Septemba 19, 2018
Kusuka esitolo sethu: I-Villa Ekhululekile Nezindlu Zokulala ezine eGrižane-belgrad, Nge-Fantastic Sea View kanye namachibi Okubhukuda Ngaphandle Nokungaphandle: $ 3546.57 kuphela!
IJalimane, igama le-EU e-Albania ukuqhubeka nokuguqulwa kwenqubekela phambili
Ibhayisikobho entsha ye-NASA ibonisa indlela impumelelo ye-tech yendlu ehlala ngayo njalo
'Ukubulala inkathi': Izigidi ezingu-5 zakwa-Yemeni zibhekana nendlala
Impendulo ye-Champions League: Ukuphumelela kwe-Liverpool, i-Spurs ilahlekelwa yimishini ye-golf ye-Manchester
Siziqhenya ngezibalo zethu, yingakho sibazisa umphakathi!
Ungazihlola ukuthi singumhlaba wonke ngempela, ngokuhlukahluka okungafani kwamazwe izivakashi zethu ezivela kuzo, kanye nezilimi ezihlukahlukene ezihlukile ezifunda izindaba zethu. Kuzibophezela kwethu ukuhlinzeka izindaba ezinhle kakhulu emhlabeni jikelele ngokuba izethameli zomhlaba wonke futhi sisebenza kanzima ukukwenza nsuku zonke kube ngokoqobo ngempela.
Siyabonga kakhulu kuwe, isivakashi se-jlk.news, osithembelayo ngalokho futhi akwenze kwenzeke!